Sida loo badbaadiyo batteriga inta aad ciyaareyso Pokemon Go | Wararka IPhone
Pokemania nagama tegeyso daqiiqad bilaash ah. Waxaan ku raaxeysaneynay Pokemon Go saacado iyo saacado adoo adeegsanaya Aqoonsiga Apple ee wadan la heli karo inta aan sugeyno inuu yimaado Spain. Waxaan ku siineynaa talooyin dhowr ah si aad u keydiso batteriga inta aad ciyaareyso Pokemon GoSidaa darteed waxaad ka heli kartaa inta ugu badan safar kasta, kulan kasta, dagaal kasta. Ugaarsiga Pokemon hada waa sheygaaga kaliya, mana aha inaad u ogolaato batterigaaga iPhone inuu soo dhex galo adiga iyo jimicsiga xiga. Tilmaamahan yar ayaa si sax ah u sameyn doona taas.
1 Habka Awoodda Yar ee iOS
2 Habka badbaadinta batteriga waxaa laga heli karaa Pokemon Go
3 Fiiro u yeelo dhalaalka shaashadda, waa go'aan
Habka Awoodda Yar ee iOS
Waxay umuuqataa wax iska cad, laakiin waa sababta ugu cad laakiin ugu waxtarka badan. Habka awoodda hoose ee iOS wuxuu yareeyaa awooda anteenada iyo xawaaraha waxqabadka. Sababtaas awgeed, kicinta habka isticmaalka hooseeya ee iOS waa cabirka ugu wax ku oolka badan kadib labadii maalmood ee aan tijaabada ahaa kadib waxaan awooday inaan indho indheeyo. Waxaa si aad ah loogu talinayaa inaad bilowdo ka hor intaadan ciyaarin, maadaama waayo-aragnimadeena aan hoos u dhigi doonin gabi ahaanba adoo kicinaya.
Habka badbaadinta batteriga waxaa laga heli karaa Pokemon Go
Qaar badan oo ka mid ah ma yaqaaniin, laakiin goobaha Pokemon Go waxaan ku leenahay qaabeyn loo maleynayo inuu batari badbaadiyo marka la isticmaalayo. Shakhsiyan, maan arkin isbadal ku yimid isticmaalka sida muuqata sida isticmaalka habka isticmaalka hooseeya ee ay iOS na siiso, laakiin ikhtiyaar kasta oo loogu talagalay in lagu kordhiyo nolosha waxtarka leh ee baterigeena oo aan mar kaliya ku qaadno ayaa lagula talinayaa Si aad u dhaqaajiso, dhagsii bartamaha Pokeball, dhinaca kore ee midigna waxaan ka heleynaa "Ikhtiyaarrada" menu oo matalaya lowska Kan afraad ee liiska ku jira waa «Badbaadiyaha bateriga«.
Fiiro u yeelo dhalaalka shaashadda, waa go'aan
Dhamaanteen waan ognahay taas mid ka mid ah howlaha ugu isticmaalka badan casriga Waa iftiinka dambe ee LED-ka shaashadda marka laga hadlayo LCD. Joogitaanka dariiqa, iyo in ka badan oo hadda ah xagaaga, dhalaalka shaashadda ayaa kor ugu kici doona ugu badnaan haddii aan ku qaabeyno qaab otomaatig ah (taas oo guud ahaan ugu fiican), sidaa darteed waxay ku bixin doontaa inta ugu badan ee batteriga ah. Haddii aan ka taxaddarno inaan wax yar ka soo degno Xarunta Xakamaynta. Waxaan rajeyneynaa in talooyinkeena ay kuu adeegeen isla markaana haddii aad wax intaa ka badan hayso, ku dhaaf sanduuqa faallooyinka si aad uga caawiso isticmaaleyaasha kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo badbaadiyo batteriga inta aad ciyaareyso Pokemon Go
Waxaan dhigay taleefanka gacanta oo foorara iyadoo pokemon-ka ciyaarta la socdo shaashaduna ay madowdahay. hadaan si caadi ah u dhigo waxay ka dhigeysaa mid muuqata xD
Taasi waa si sax ah waxa habka ciyaarta keydinta awoodda u gaarka ah uu sameeyo.
Dayaanna  dijo
In kasta oo ay u egtahay wax lagu qoslo, caarada koowaad ama caawimaadda aniga ima soo marin. Mahadsanid, salaan ka timid Costa Rica.
Jawaab Jose  (@ Josecr07)
Facebook Messenger waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu daray taageerada Peek & Pop
Pokemon GO waa la cusbooneysiiyaa oo uu xaliyaa dhibaatada akoonnada Google